Tag: ady browser | Martech Zone
Tag: ady browser
Firefox nandresy ny Adin'ny Browser
Zoma, Desambra 8, 2006 Alatsinainy Desambra 17, 2018 Douglas Karr
Ny fijerena ny fizarana tsena farany ho an'ny mpizaha dia manome fahitana kely momba izay mandresy sy resy amin'ny ady. Manohy manangana hery i Firefox, mandady ambony i Safari, ary very toerana i Internet Explorer. Te-hanome hevitra momba ireo telo ireo aho miaraka amin'ireo 'teôria' ahy momba izay mitranga. Internet Explorer Taorian'ny nandravana ny Netscape Navigator, IE dia nanjary fari-bolamenan'ny harato. Tsotra, mandeha ary nohafatra mialoha tamin'ny Microsoft Products rehetra ilay browser.